अमेरिकी राष्ट्रपति कति सुरक्षित ? अमेरिकामा परमाणु बम खसालेमा कहाँ जालान ट्रम्प ? यस्तो कुरा बाहिरियो ... - Sudur Khabar
अमेरिकी राष्ट्रपति कति सुरक्षित ? अमेरिकामा परमाणु बम खसालेमा कहाँ जालान ट्रम्प ? यस्तो कुरा बाहिरियो …
admin February 12, 2018 विश्व 0
Total Reader : 81
बीबीसी। यदि अमेरिकामाथि परमाणु आक्रमणको खतरा पैदा भयो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कहाँ लुकाइन्छ होला?
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमेन देखि लिएर ट्रम्पसम्म सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिकालागि यस्तो अवस्थामा बंकरमा बस्ने सुविधा छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पकालागि कतिवटा छन् बंकर?
परमाणु आक्रमणको खतरा पैदा हुने वित्तिकै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सुरक्षित स्थानमा लगिनेछ। तीमध्ये एक बंकर ह्वाइट हाउस मुनि छ। जसलाई १०५० मा बनाइएको हो। अर्को बंकर भर्जिनियाको ब्लू रिज माउन्टेन वेदर नामको पहाडमा छ।
अमेरिकी नेवीले ‘पीनट आइल्याण्ड’ नामक एक बंकर अमेरिकी राष्ट्रपति जन एफ क्यानेडीकालागि बनाएको थियो। यो बंकर फ्लोरिडामा पाम बीच हासउको नजिकै छ, जहाँ कहिलेकाँही क्यानेडी जानेगर्थे। पाम बीच हाउस र बंकरको दूरी मात्र दश मिनेटको छ। यो बंकरलाई ‘डिटेचमेन्ट होटल’ पनि भनिन्थ्यो। जसलाई बनाउन ९७ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो। ट्रम्पसँग उनको आफ्नै एक निजी बंकर पनि छ, जुन फ्लोरिडामा ‘मार–ए–लागो’ नामक उनको निजी सम्पत्तिका रुपमा रहेको छ।
बंकरमा को को जान सक्छन?
यदि राष्ट्रपतिको बंकरको कुरा गर्दा उनीसँग तीनवटा बंकर छन्। जसमा पीनट आइल्याण्ड, ह्वाइट हाउस र माउन्ट वेदर सामेलछन्। पीनट आइल्याण्डमा राष्ट्रपतिका साथै उनका एक दर्जन सहयोगी र सचिव जान पाउँछन्। यो बंकरमा जम्मा ३० जना अटछन्। ९÷११ को आक्रमणका क्रममा ह्वाइट हाउस बंकरमा तैनाथ रहने मरिन रर्बट डार्लिङका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले राष्ट्रपतिसहित ती व्यक्तिकालागि व्यवस्था गरेका थिए जो, शीर्ष पदमा कार्यरत छन्।
डार्लिङ भन्छन्, ‘अमेरिकामा ११ सेक्टेम्बरको आक्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति डिक चेनी बंकरमा काम गरिरहेका थिए। उनका साथमा उनकी श्रीमती, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कोण्डोलिजा राइस, रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफिल्डसहित अन्य केही मानिस थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुश एयर फोर्स वनमा थिए। कांग्रेस सदस्यकालागि पश्चिम भर्जिनियामा ह्वाइट सल्फर स्प्रिंग्स नजिकै ग्रीनब्रायर रिसर्टमा एक बंकर थियो।
यो बंकरको नाम प्रोजेक्ट ग्रीक आइल्याण्ड थियो र दशकौंसम्म यसको प्रयोग गरिएको थियो। तर, यसको नाम १९९२ मा बंकर बन्द भएपछि मात्र सार्वजनिक गरियो।
के परमाणु आक्रमणबाट बंकर बच्न सक्छ?
भर्जिनियामा माउन्ट वेदर नजिकै बस्ने मानिस यसलाई ‘डुम्सडे सिटी’ अर्थात प्रलयको दिन भएको शहर भन्छन्।
ब्लुमाउन्ट, भर्जिनिया नजिकै १७५४ फिटको माउन्ट वेदर पहाडलाई राष्ट्रपति र उनका सहयोगीकालागि बंकरमा परिवर्तन गरिएको थियो। माउन्ट वेदरको रेखदेख अमेरिकी फेडरल इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी (फेमा) ले गर्छ। यसलाई सेक्टेम्बर २००१ मा अल कायदाको आक्रमणपछि सुरु गरिएको थियो।
माउन्ट वेदरदेखि दिएर पीनट आइल्याण्ड र मार ए लागो बंकरको शीतयुद्धका क्रममा बनाइएको थियो। मार ए लागो बंकरलाई १९५० को सुरुवातमा रइस माहिला, मर्जरी मेरीवेदर पोस्टले बनाएको थियो। पोस्टलाई कोरियासँग युद्ध हुने आशंका थियो।
तेस्रो विश्वयुद्ध भैहाले पनि पुर्णरुपमा सुरक्षित रहनसक्ने यी १० देश, नेपाल कति सु्रक्षित होला?
सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी पक्राउ
नेपालमा भ्रष्टाचारले देश खोक्रो बनाइ सक्यो, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भने भ्रष्टाचार बिरुद्ध डिसेम्बरदेखि झन् कडा रुपले प्रस्तुत हुँदै :